Demarai Grey ကကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ပင်မစာမျက်နှာ United Kingdom ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ အင်္ဂလိပ်ဘောလုံးကစားသမားများ Demarai Grey ကကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
LB "အကောင်းဆုံးနာမည်လူသိများသူတစ်ဦးဘောလုံးပြိုင်ပွဲ Genius ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက်မီးခိုးရောင်". ကျွန်ုပ်တို့၏ Demarai Grey ကကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့သူ့ရဲ့ကလေးဘဝအချိန်ကနေယနေ့အထိသည်သင်မှတ်သားလောက်ဖြစ်ရပ်များတစ်ဦးအပြည့်အဝအကောင့်ဆောင်ခဲ့ရမည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်သူ၏အစောပိုင်းဘဝ, မိသားစုနောက်ခံ, ကျော်ကြားမှုမတိုင်မီဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိပါဝင်ပတ်သက်, ကျော်ကြားမှုပုံပြင်, ကြားဆက်ဆံရေးနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝစသည်တို့မှထမြောက်
ဟုတ်ပါတယ်, လူတိုင်းကသူ့ကိုအင်္ဂလန်အတွက်အလျင်မြန်ဆုံးဘောလုံးကစားသမားတဦးတည်းကိုကသူ့အရှိန်အဟုန်, dribbling နှင့် technique ကိုအကြောင်းကိုသိတယ်။ သို့သျောလညျးကိုသာအနည်းငယ်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်သော Demarai Grey ကရဲ့အတ္ထုပ္ပတ္တိစဉ်းစားပါ။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ် ado ခြင်းမရှိဘဲ, ရဲ့စတင်ဖို့ကြကုန်အံ့။
Demarai Grey ကကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- အစောပိုင်းဘဝနှင့်မိသားစုနောက်ခံ
Demarai Remelle Grey ကအဆိုပါရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည် ဇွန်လ 28 ၏ 1996th နေ့ ဘာမင်ဂမ်, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း။ မီးခိုးရောင်မှသူ၏မူလအစရှိပါတယ် တိုက်ရိုက် Jamaican အမြစ်များရှိသည်သောသူသည်သူ၏မိဘများထံသို့ဂျမေကာကျေးဇူးတင်စကား။ ဤသူဂျမေကာအဘို့ကစားရန်နေဆဲအရည်အချင်းပြည့်မီစာအရေးအသား၏ထိုအချိန်ကကဲ့သို့ဖြစ်၏ဆိုလိုသည်။
Demarai Grey ကအဖြစ်သူချင်းဗြိတိန် Jamaican ထိုကဲ့သို့သောနေဖြင့်သတိပြုမိကြောင်းကနေအများကြီးကွဲပြားခြားနားသောမဟုတ်သောအရာဗြိတိသျှ Jamaican ယဉ်ကျေးမှုနဲ့လူလတ်တန်းစားမိသားစုနောက်ခံကနေလာ; ဒံယလေကစတားရစ်ခ်ျ, Theo Walcott, အဲလက်စ် Oxlade-Chamberlain, Raheem Sterling, Kyle Walker က, ဒန်နီရို့စ နှင့် ခရစ်စမောလင်း.
မီးခိုးရောင်ရဲ့ညီအစ်မ - ခရက်ဒစ်တွစ်တာမှ
သူကကျောင်းချိန်အပြီးတိုးချဲ့ထားတဲ့ယှဉ်ပြိုင်ဘောလုံးကစားခြင်းကိုစတင်ရှိရာမိမိအဆိအစ်မနှင့်အတူကြီးပြင်း, Grey က Frankley High School တွင်တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှဦးဆောင်အဖြစ်အစောပိုင်းဘောလုံးလှုပ်ရှားမှုများခွဲဝေပေးဆောင်။
Demarai Grey ကကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- အစောပိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေးဘဝ
Frankley High School တွင်အတူသူ့အချိန်မီ, Demarai Grey ကမိမိအမြို့ရဲ့ဒေသခံလူငယ်အသင်း, Cadbury နှင့်အတူရဲ့အားကစားအငယ်တန်းအသင်းများကစားစတင်ခဲ့သည်။ သူကဘာမင်ဂမ်အကယ်ဒမီနဲ့ပညာသင်ဆုအခွင့်အလမ်းအနိုင်ရသူ့ကိုမှဦးဆောင်သည့်ကလပ်နှင့်အတူတစ်ဦးအထင်အမြင်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
မီးခိုးရောင်တစ်ခုအောက်မှာ-11 အဖြစ်ချယ်လ်ဆီးအသင်း '' အကယ်ဒမီဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ မျဉ်းချသူတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနှင့်အတူမိတ်ဆွေများကဖြစ်လာခဲ့သည် နာသန် Redmond သူကတခါသည်သူ၏လူငယ်ကစားသမားဘပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအဖြစ်မှတ်တော်မူသော။
နာသန် Redmond နှင့်အတူ Demarai Grey ကရဲ့အစောပိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု။ Pinterest နှင့်ဘာမင်ဂမ် Post ကိုမှအကြွေး။
Demarai Grey ကကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- Fame မှလမ်း
အဆိုပါ bubbly, အေးဆေးတည်ငြိမ်နှင့်ပျော်ရွှင် Grey က 2012 တိုင်အောင်သူ့ဘောလုံးပညာသင်ဆုဆက်ပြောသည်။ မိမိအစွမ်းဆောင်ရည်လာမည့်ရာသီ (2013-2014) သူ့ကိုရာသီဆုကလပ်ရဲ့အကယ်ဒမီ Player ကိုရရှိခဲ့သည်။
Fame မှ Demarai Grey ကန့်လမ်း (ဘီဘီစီမှခရက်ဒစ်)
ဒါကရာသီလည်းသူကပုံမှန် starter ဖြစ်လာဖို့ယှဉ်ပြိုင်စတင်ဘယ်မှာဘာမင်ဂမ်ရဲ့ပထမဦးဆုံးအဖွဲ့တစ်မြှင့်တင်ရေးရတဲ့ Grey ကမျက်မြင်။
Demarai Grey ကကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- Fame မှထလော့
အဆိုပါဘာမင်ဂမ်ပထမဦးဆုံးအသင်းအတွက်နေစဉ်, Grey ကဟောင်းတဦးယူနိုက်တက် rejectee Federico Macheda နှင့်အတူပထမဦးဆုံး-အဖွဲ့သည်အခန်းကဏ္ဍများအတွက်ယှဉ်ပြိုင်စတင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာ Grey ကထွက် edging နှင့်ကလပ်မှထွက်ခွာ Macheda အောင်မြင်သောကျန်းမာယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါကဘာမင်ဂမ်ကလပ်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကသူပိုမိုရင့်ကျက်ခြင်းခံခဲ့ရသည့်ယုံကြည်ချက်ရှိခဲ့တဲ့အချိန်ပဲ။ မီးခိုးရောင်သူ့ကိုအမည်ရသုံးဆုဖလားဆွတ်ခူးမြင်သောအောက်ပါရာသီ 2014-2015 မှတ်တမ်းတင်ဖဲ့; ဒီဇင်ဘာလ 2014, ဘာမင်ဂမ်စီးတီးရည်မှန်းချက်နှင့် 2014-2015 ရာသီ၏ကစားသမားများ၏တစ်လဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်လူငယ်ကစားသမား။
မီးခိုးရောင်ရဲ့လက်တွေ့ပြီးနှင့်ကာကွယ်ရေးအတွက်ကိုဖုံးလွှမ်းရန်နိုင်စွမ်းသည်သူ၏လွတ်မြောက်ရေးအတွက်အပိုဒ် activated သူထို့နောက်ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလား Chaser Leicester စီးတီးတို့ကသတိမပြုမိမသွားခဲ့ပါဘူး။ မီးခိုးရောင်ဇန်နဝါရီလ4၏ 2016th အပေါ်လိဂ်ချန်ပီယံဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး၎င်းတို့၏ပရီးမီးယားလိဂ်ပန်းဦးရစ်သရဖူကိုလုံခြုံရေး၌သူ၏အသင်းဖော်ကူညီပေးခဲ့သည်။
Demarai Grey ကယ့်ပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပရီးမီးယားလိဂ်ရှင် (PremierLeague မှခရက်ဒစ်)
Demarai Grey ကကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- relationship ဘဝ
Demarai Grey ကချိန်းတွေ့ကားအဘယ်သူနည်း
Demarai Grey ကရဲ့ Girlfriend- အဆိုပါမရေမတွက်အချက်အလက်နဲ့ (Instagram ကိုမှခရက်ဒစ်)
Grey က၏ဖြစ်နိုင်သည်ဝှက်ထားသောအချစ်သီချင်းသူ့မေတ္တာဘဝကအရမ်းပုဂ္ဂလိကနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်ဒရာမာ-အခမဲ့ကြောင့်ရိုးရှင်းစွာအများပြည်သူမျက်စိများ၏စိစစ်လှရာတစျခုဖွစျသညျ။ စာအရေးအသား၏ထိုအချိန်ကအဖြစ်မီးခိုးရောင်သူ၏ဆကျဆံရေးဘဝအပေါ်အများပြည်သူမဆိုသတင်းအချက်အလက်စေခြင်းငှါမဆုံးဖြတ်လိုက်ပါသည်။
သူဟာတစ်ချိန်ကသူ့ဇနီးပစ္စည်းအကြောင်းမေးခွန်းကိုဖြေဖို့အင်တာဗျူးတောင်းဆိုမှုကိုခွင့်ပြုခဲ့။ အောက်ကအင်တာဗျူး session တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Demarai Grey ကကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- မရေမတွက်အချက်အလက်
အဆိုပါနေ့ Demarai Grey ကမရဏလိမ်လည်လှည့:
မင်းသိလား?… သူက Leicester စီးတီးရဲ့ PA ဆိုပြီးဆုတစ်ခရီးစဉ်အပေါ်တစ်ဦးရဟတ်ယာဉ်၏ဓါးနဲ့ရငျးနှီးတဲ့မုတ်ဆိတ်ရိတ်ခဲ့ပြီးနောက် Demarai Grey ကတစ်ချိန်ကသေခြင်းသို့လိမ်လည်လှည့်။
အဆိုပါနေ့က Demarai Grey ကရဲ့ cheat မရဏ (FameFlynet.uk.com မှခရက်ဒစ်)
သူလုနီးပါးရဟတ်ယာဉ်ရဲ့အမြီးရဟတ်ဓါးသွားသို့လမ်းလျှောက်အဖြစ်ကြောင့်ဓါးလေတိုက်နှုန်းများ၏အင်အားသုံးဖို့ဗြိတိသျှ Jamaican ဆွဲထုတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါရဟတ်ယာဉ်ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏လျင်မြန်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုဟာဆိုးဝါးမတော်တဆမှုတားဆီးအတွက်ကူညီပေးခဲ့သည်။ ဗီဒီယိုအဖြစ်အပျက် Watch ။
သူဟာတစ်ချိန်ကသေစေလောက် Hippy Crack ရှိုက်:
အဆိုပါဖြစ်ရပ်အဲဗာတန်တစ် Leicester ပရီးမီးယားလိဂ်ရှုံးနိမ့်ပြီးနောက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ဒါဟာသူ့ကိုယ်သူ '' အဖြစ်လူသိများနေတဲ့အလားအလာသေစေလောက်သောနိုက်ထရပ်အောက်ဆိုဒ်, ဓာတ်များသည့်ဘာမင်ဂမ်မွေးဖွားဘောလုံးသမားရိုက်ကူးယခုအချိန်တွင်ခဲ့သည်hippy အက်ကွဲ'' ။
Demarai Grey ကရုပ်ရှင်သူ့ကိုယ်သူစဉ် (Credit Hippy Crack ဓာတ်များ ကြည့်မှန်)
မီးခိုးရောင်ပစ္စည်းဥစ္စာဓာတ်များကိုအပြီး, မိမိ Snapchat အပေါ် incriminating ကဗီဒီယို post ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
ဒါကြောင့်မြင့်မားတဲ့ဒါပေမဲ့ဗြိတိန် Anti-မူးယစ်ဆေးဝါးအေဂျင်စီများရဖို့ဥပဒေရေးရာဖြစ်ပါသည်, ဖြစ်သော်လည်းဓာတ်ငွေ့ဓာတ်များကိုအောက်စီဂျင်၏ဦးနှောက်ဆုံးရှုံးနှင့်သတ်ပစ်နိုင်သည်ကိုသတိပေးကြသည်။
Demarai Grey ကကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- လူနေမှုပုံစံ
အကယ်စင်စစ်အစေးပယ် Demarai Grey ကယ့်ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံကိုသိရန်ရယူခြင်းသူ့ကိုတစ်ပြည့်စုံရုပ်ပုံဆောကူညီပေးသည်။
ထိုအဆိုအရ ကြည့်မှန်, ပရီးမီးယားဆုရှင် Demarai Grey ကအနက်ရောင် Lambo နဲ့သူ့ရဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ခေါင်းစဉ်ကျင်းပခဲ့သည်။
သူကတော်တော်လေးကားများနှင့် duplex အထင်ကြီးလက်တဆုပ်စာအားဖြင့်အလွယ်တကူသိသာသည့်ခမ်းနားထည်ဝါစွာလူနေမှုပုံစံနထေိုငျသောဘောလုံးသမားအမျိုးအစားမဟုတ်ပါဘူး။
Demarai Grey ကကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ
သငျသညျမိမိအအက်ကွဲအမှားနှင့်ရဟတ်ယာဉ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအမှားတွေအကြောင်းကိုဖတ်ပြီးပါပြီရမယ်ပေမယ့်။ သို့သော် Demarai Grey ကရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝကိုသိရန်လာပြီသငျသညျအထံတော်၌ပြည့်စုံရုပ်ပုံ get ကိုကူညီလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မပြုမီ, s ကိုမေးခွန်းမေးဖို့ကြကုန်အံ့။
သင်တစ်ဦး flamboyant ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစဉ်းစားပေလိမ့်မည်။ သို့သော် Demarai Grey ကကမ္ဘာကြီးကိုပိုကောင်းတဲ့နေရာအရပ်အောင်အပေါ်သူ၏အချိန်နှင့်ပိုက်ဆံရင်းနှီးမြှုပ်နှံချစ်သောသူတစ်ဦးနွေးနှလုံးလူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
Demarai Grey ကရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး (Instagram ကိုမှခရက်ဒစ်)
မီးခိုးရောင်အစဉ်အမြဲမေတ္တာအလုပ်အတွက်အကြီးအကျယ်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်။ သူကသားသမီးရဲ့ဆေးရုံများများအတွက် Moni မြှင့်ခြင်းနှင့်နေမကောင်းသွားရောက်ကိုချစ်သောသူတို့အားသာကြားတွင်ဖြစ်ပါသည်။ သူဟာယူနီဆက်ဗြိတိန်သံအမတ်ကြီးလာမှီကအချိန်တစ်ခုသာကိစ္စပါပဲ။
သမ္မာကျမ်းအမှန်တရားနေစစ်ဆေးခြင်း: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Demarai Grey ကကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ဖတ်နေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တွင် LifeBogger, ကျနော်တို့တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုများအတွက်ကြိုးစားကြသည်။ သင်မှန်မကြည့်ဘူးသောအရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေပါလျှင်အောက်တွင်မှတ်ချက်ခွငျးအားဖွငျ့အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူဝေမျှပါ။ ကျနော်တို့ကအမြဲသင့်ရဲ့အိုင်ဒီယာကိုတန်ဖိုးထားလေးစားပါလိမ့်မယ်။
အာရုန်သည်ဝမ်-Bissaka ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
လေတန်ဘိန်းစကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Raheem Sterling ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်